KITAPO WHELPING, WHELPING ARY FIOMPIANA ALIKA KELY - ALIKA
Kitapo Whelping, Whelping ary fiompiana alika kely
Rehefa mandrehitra alika kely dia tena ilaina ny miomana. Midika izany fa manana izay ilainao eny an-tanana. Ireto misy famatsiana sy toro-hevitra tokony hodinihinao, avy amin'ny MistyTrails Hipedia.
Asaivo miantso ny mpitsabo anao ary ny nomeraon-telefaona azonao ampiasaina.
Fenoy lasantsy ny fiaranao.
Raha ilaina dia asao mpiambina zaza rehefa miantso.
Ny tsara indrindra dia hanana namana voaantso ianao hanampy anao, ary mitondra fiara mankany aminao raha ilaina izany, na hanampy ankizy na zavatra hafa mety hitranga.
Ny endrik'ity boaty ity dia mety tsara ho an'ny alika kely hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 3 herinandro hitazomana azy ireo ho voafehy. Indraindray tsy maintsy afindrao amin'ny rindrina ny varavarana hitahirizana azy ireo rehefa mihalehibe izy ireo. Mandritra ny 3 herinandro dia avadika AZY ilay boaty (avadika ambony ambany) ka ny fidirana miakatra no lasa vavahady mankamin'ny faritra misy vilany .
Boaty fikotranana miaraka amina arofanina (ampy hamelarana ny tohodrano) miaraka amin'ny lalamby izay manakana ny alika renim-pianakaviana tsy hikiky ny sisiny). Ity dia ho alika alika mandritra ny 2.5 ka hatramin'ny 3 herinandro, avy eo dia mila itarina tsikelikely. Amin'ny 2.5 herinandro dia mila ampiana foibe fametahana taratasy, ary manodidina ny 4 herinandro dia mila asiana faritra filalaovana. Amin'ny 6 herinandro dia mila toerana handehanana ...
Gazety, lamba rovitra ary lamba famaohana taratasy
Boaty kely mafana sy mafana miaraka amin'ny pad fanafanana ho an'ireo zaza vao teraka (sy / na tavoahangin-drano mafana nomanina ho an'ny dia lavitra)
Tehirizo ny lamba famaohana kely ao anatin'ity boaty ity mba hanafanana azy ireo, ny alika kely sasany dia mila soloina mafy amin'ny lamba famaohana mafana
Hety hanapaka tadiny
Hemostat mankany amin'ny tadin'ny crimp
Volo-nify tsy mihombo hampifamatotra kofehy raha ilaina
Fonon-tànana fandidiana sy jelly K-Y
Thermometer, Vaseline, boky ary penina
Jiro raha sendra tapaka ny jiro
Riby raha ilaina hamantarana alika kely
Tavoahangy preemie sy mpisolo ronono canine
NutriCal ho an'ny tohodrano ary ron-kena na ronono an-tavy
Syringe amin'ny tsiranoka syringe ao am-bavan'ny tohodrano (na tavoahangy famaohana)
Kitapo fatoriana matory sy ondana ho any an-toby eo akaikin'ny boaty fikasana
Kalsioma — na Calsorb, aisy gilasy na vanila na fanafody hafa (ny gilasy vanila dia mahafinaritra eo anelanelan'ny alika kely, satria manome hydration sy glucose azy ireo ho an'ny angovo izay mampitombo ny calcium dia hanampy ny fihary atin'ny parathyroid hamoaka hormonina avy amin'ny taolany hanampy ny hozatra sy manosika)
Avy amin'ny ankavia ka hatramin'ny ankavanana
Notebook misy isa sy pejy ho an'ny fandraketana ny fandrosoan'ny tohodrano, lanjan'ny alika kely sns ... penina, telefaona, monitor zaza, mpanadio tanana, NutriCal, jelly sy fonon-tànana vita amin'ny kY, fonosana, Vaseline ary thermometer, refy, Mamalac sy tavoahangy, alikaola, hety , felam-bolo sy hemostat, kofehy, jiro hafanana.
Alika kely yorkie 1 herinandro
alika sera mainty sy mainty
miteraka alika lava lela
afangaro sinoa sy chihuahua sinoa
klioba alika mifangaro amerikana
bulldog amerikana volontany sy fotsy